ချိုးဖြူငှက်လမ်းသွယ် ကဗျာ+အသင်း - Knowledge is Free
``ဒါဟာ တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိသေးတဲ့ အမှန်တရားရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့´´
*ကျွန်တော်တို့ ရင်ဘတ်ထဲကို ကဗျာတွေ ၀င်ရောက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာတော့ ကြာပါပြီ။ တကယ်တမ်းစစ်ကြေငြာခံ ရတာက မြန်မာကဗျာဆရာ ``မောင်ချောနွယ်´´ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၂၊ စက်တင်ဘာရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွေ မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဒီကဗျာအ၀န်းအ၀ိုင်းလေးကို ရင်ခုန်သံတူညီတဲ့ ဘော်ဒါတစ်စု ``ချိုးဖြူငှက်လမ်းသွယ်´´ လို့ အမည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ပန်းခြံထဲက လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင်ကြီးကတော့ သက်သေပေါ.။
*ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကဗျာရင်ခုန်သံကို ချွန်းဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်နှလုံးသား ကို ကိုယ်ညာလို့ မရတော့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ကဗျာကိုချစ်တယ်။ ပန်းကလေးတွေ၊ ကောင်မလေးတွေကိုလည်း ချစ်တာပါပဲ။ လောကမှာရှိတဲ့ အလှတရား အားလုံးရဲ့ ပြုစားခြင်းကို ကျေနပ်စွာ ခံယူခဲ့ကြပါတယ်။
*ချိုးဖြူငှက်ဆိုတာက ငြိမ်းချမ်းလွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ ပြယုဂ်ပဲ၊ လမ်းဆိုတာက ခရီးရောက်ဖို့ပါ။ ငြိမ်းချမ်းသာယာတဲ့ လွတ်လပ်လမ်းသွယ်လေးပေါ့။ ၀င်ရောက်လည်ပတ်ပါ။ နားခိုဆွေးနွေးစရာလည်း ရှိမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ပထမ ဆုံးလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာစာအုပ်လေးရှိတယ်။ နတ်တွေမနာလိုလို့ အ၀ှက်ခံထားရတဲ့ စာအုပ်လေးပေါ့ ...။
နာမည်က ``၂၀၀၄ ဒီဂရီ´´တဲ့။ (၂၀၀၄ ခုနှစ်ကပါ၊ တကယ်တမ်းက အဲဒီထက်စောပါတယ် )
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကဗျာလေးတွေကို မြည်းကြည့်ပါ။ မိတ်ဆွေရင်ထဲ ထိခဲ့ရင်လည်း ပါဝင်ရေးသားလို့ ရပါတယ်။
``ကမ္ဘာကြီးကို ကဗျာနဲ့ သူကောင်းပြုကြပါစို့´´
ချိုးဖြူငှက်လမ်းသွယ် ကဗျာ+အသင်း (သို့) သူရဲကောင်းများ
* သျှင်းသျှင်း * အင်တာနတ်
* ÷ မျိုး * နေရှားလူ
* ညီအောင်ခက်နွယ် * သူ့သူ့ (ကလေး)
* စောရဲနောင် * ဏှင်းအိမ်ဈာန်
* ညီမင်းသူ * ဗိုလ်ဗိုလ်
=ကဗျာဆရာ+ ဆိုတဲ့ ပညတ်လေးတွေ ထူအမ်းအမ်းနဲ့
ပရိယေသနထဲမှာ လုံးပါးပါး . . . ။
သွေးကြောလေးတစ်ခုပါပဲ . . .။
မနေ့ကထားခဲ့တဲ့ ငါ့ကတိ ဘယ်မှာလဲ
ဘယ်လိုမှ သဲလွန်စ မရှိတော့တဲ့
ကျွန်တော့်လေ့လာမှုတွေ လိုအပ်ခဲ့ပါတယ် . . . ။
ဒုက္ခက နှင်းကွဲချိန်မှာ တောက်ပတဲ့အလင်းလို
စကြာဝဠာအပြည့် မီးတောက်မီးလျှံတွေ ငါနင်းဖြတ်ပါရစေ
သောကတွေ မီးခိုးလိုပေါ့ပါးသွားမလား ...
မြို့ရိုးဟောင်းထဲက အုတ်ချပ်တွေကို ကိုယ်ချင်းစာမယ်
နှလုံးသားတစ်ခုကနေ နှလုံးသားတစ်စီ ကဗျာတွေစီးဆင်းဖို့
ငါ့ကို စိတ်တစ်ခု အပိုဖန်ဆင်းပေးပါ ဘုရားသခင် ...။
ကညစ်ဟာ ဂီတ မဟုတ်သလို
ဂီတဟာလည်း ပုံဖော်တဲ့ ပန်းချီ မဟုတ်ဘူး ...။
စားစရာ အစုံစုံနဲ့ ဆေးလိပ်တိုမျိုးစုံရဲ့ ဒဏ်ကြောင့်
ပြန်လည် လန်းသစ်ကြစို့ရဲ့ ...။
Tags: Poems, Blog Helps, Repairs, Design, References
Posted by kmo at 2:27 PM